Akụkọ - Usoro R&D nke usoro ngwaahịa Rainpoo
R&D akara nke usoro ngwaahịa Rainpoo
Site na iwebata etu elebara anya na esi emetuta ihe ngosi 3D, ị nwere ike inwe nghọta mbido banyere njikọ dị n’etiti ogologo oge na FOV. Site na ịtọ ntọala nke ụgbọ elu na usoro ịme ngosi 3D, usoro abụọ a nwere ọnọdụ ha oge niile. Yabụ kedu mmetuta abụọ a nwere na nsonaazụ 3D nke nsonaazụ? N'isiokwu a, anyị ga-ewebata etu Rainpoo si chọta njikọ na usoro nke ngwaahịa R&D, yana otu esi enweta nguzozi n'etiti esemokwu dị n'etiti elu ụgbọ elu na nsonaazụ 3D.
1 、 Site D2 ka D3
RIY-D2 bụ ngwaahịa emerepụtara maka ọrụ nyocha nke cadastral. Ọ bụkwa igwefoto mbụ nke na-agbakwụnye mgbada na ime-lens imewe. D2 nwere ezi nhazi ọfụma yana ogo ịdị mma dị mma, nke kwesịrị ekwesị maka ịme ngosipụta ihe nkiri na mbara ala ma ọ bụghị oke ala. Agbanyeghị, maka nnukwu ọdịda, ala dị mgbagwoju anya na ọdịdị ala (gụnyere eriri ọkụ ọkụ, anwụrụ ọkụ, ọdụ ụgbọ ala na ụlọ ndị ọzọ dị elu), nchekwa ụgbọ elu nke drone ga-abụ nnukwu nsogbu.
Na arụmọrụ arụmọrụ, ụfọdụ ndị ahịa emeghị atụmatụ dị elu nke ụgbọ elu, nke mere ka drone kpọgidere eriri ọkụ ọkụ ma ọ bụ kụọ ebe ọdụ ahụ; Ma obu obu ezie na ufodu drones nwere obi uto iji gabiga ebe di egwu, ha choputara na drones di ezigbo nso na ebe ndi ahu di egwu mgbe ha nyochare foto nke ikuku.
Otu ọdụ ụgbọ ala na-egosi na foto ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ na ọ dị nso na drone ahụ, o yikarịrị ka ọ ga-ada Ya mere, ọtụtụ ndị ahịa enyela anyị aro: Enwere ike ịhazi igwefoto ogologo igwe ogologo iji mee ka elu ụgbọ elu nke drone dị elu ma mee ka ụgbọ elu ahụ ghara nchebe? Dabere na ndị ahịa mkpa, dabere na D2, anyị mepụtara a ogologo Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo version aha ya bụ RIY-D3. E jiri ya tụnyere D2, n'otu mkpebi ahụ, D3 nwere ike ime ka elu ụgbọ elu nke drone dịkwuo ihe dịka 60%.
N'oge R&D nke D3, anyị kwenyere mgbe niile na ogologo oge hiwere isi nwere ike ịnwe elu ụgbọ elu dị elu, ịdị mma nke ịdị mma na nke ziri ezi. Ma mgbe arụchara ọrụ ahụ, anyị chọpụtara na ọ bụghị dị ka atụ anya ya, ma e jiri ya tụnyere D2, ụdị 3D nke D3 wuru bụ nke nwere nsogbu, na arụmọrụ ọrụ dị obere.
Aha Riy-D2 / D3
Ibu ibu 850g
Akụkụ 190 * 180 * 88mm
Ensdị ihe mmetụta APS-C
CMOS nha 23.5mm × 15.6mm
Nha nke pixel 3.9m
Total pikselụ 120MP
Mininum ikpughe oge etiti oge 1s
Xkpụrụ ngosipụta igwefoto Ngosiputa Isochronic / Isometric
Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo ya dị 20mm / 35mm maka D235mm / 50mm maka D3
Ịnye ọkụ Ekike edo (Ike site na drone)
ikike nchekwa 320G
Nbudata data weputara ≥70M / s
Ọnọdụ okpomọkụ -10 Celsius C ~ + 40 Celsius
Firmware mmelite N'efu
IP ọnụego IP 43
2, Njikọ dị n'etiti Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo na ịme ngosi uwe àgwà
Njikọ dị n'agbata ebe nlebara anya na ogo ịdị mfe anaghị adịrị ọtụtụ ndị ahịa nghọta, ọbụnakwa ọtụtụ ndị nrụpụta igwefoto oblique na-eji ihie ụzọ kwere na oghere elekere dị ogologo na-enye aka maka ịdị mma ịme ngosi uwe.
Ọnọdụ dị ebe a bụ: na ebumnuche na mpaghara ndị ọzọ bụ otu, maka facade ụlọ, ogologo ogologo oge, ọ ga-aka njọ nha nhata. Kedu ụdị mmekọrịta ezi uche dị na ya ebe a?
Ke akpatre nka Kedu otu ogologo ogologo si emetụta nsonaazụ 3D anyị kwuru na:
N'okpuru nkwupụta na mpaghara ndị ọzọ bụ otu, ogologo elebara anya ga-emetụta elu ụgbọ elu ahụ. Dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ dị n'elu, enwere anya anya abụọ dị iche iche, ọbara ọbara na-egosi oghere anya ogologo, na-acha anụnụ anụnụ na-egosi obere elekere anya. Ogologo elu nke oghere elekere dị ogologo na mgbidi dị α, na nkuku kachasị nke oghere dị mkpụmkpụ na mgbidi bụ β. O doro anya:
Gịnị ka “nkuku” a pụtara? Nnukwu akụkụ dị n’etiti ọnụ FOV nke oghere na mgbidi ahụ, oghere ahụ na-anọchi anya na mgbidi ahụ. Mgbe ị na-anakọta ozi na facade ụlọ, lenses dị mkpụmkpụ nwere ike ịnakọta ozi mgbidi na ntanetị, na ụdị 3D dabere na ya nwere ike igosipụta mma nke facade. Ya mere, n'ihi na Mpaghara na facades, mkpumkpu na Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo nke oghere, na ano na-anakọtara facade ọmụma na mma ịme ngosi uwe àgwà.
Maka ụlọ ndị nwere eaves, n'okpuru ọnọdụ nke otu mkpebi ala ahụ, ogologo oge elekere anya nke oghere ahụ, nke dị elu nke ụgbọ elu drone, ebe ndị ahụ kpuru ìsì n'okpuru ebe ahụ, mgbe ahụ ka ọ ga-aka njọ ịdị mma nke ịdị mma. Ya mere, na nke a dịruru ná njọ, D3 nwere ogologo elekwasị anya ogologo oghere enweghị ike ịsọ mpi na D2 site na iji obere oghere elekere.
3, Esemokwu dị n'etiti elu elu nke drone na ogo nke ụdị 3D
Dabere na mgbagha njikọ nke mgbado anya ogologo na ogo nke ihe nlereanya, ọ bụrụ na ndị gbadoro anya nke lens dị mkpụmkpụ na FOV n'akuku buru ibu zuru ezu, enweghị ọtụtụ igwefoto igwefoto achọrọ ma ọlị. Igwe oghere dị obosara (anya anya anya) nwere ike ịnakọta ozi nke ụzọ niile. Dị ka e gosiri n'okpuru:
Ọ bụghị ya dị mma chepụta Baịbụl hiwere isi n’ebe ogologo oghere dị dị ka obere ka o kwere mee?
Ghara ikwu nsogbu nke nnukwu agbagọ kpatara nke ultra-short focal length. Ọ bụrụ na etinyere etiti nke ortho lens nke kamera oblique ka ọ bụrụ 10mm ma nakọtara data na mkpebi nke 2cm, elu ụgbọ elu nke drone bụ naanị 51 mita.
N'ụzọ doro anya, ọ bụrụ na ndị drone na-onwem na ihe oblique igwefoto e mere n'ụzọ dị otú a na-arụ ọrụ, ọ ga-abụ ihe dị ize ndụ.
PS: Ọ bụ ezie na oghere ndị nwere oghere dịpụrụ adịpụ nwere oke ihe eji eme ihe ngosi na eserese eserese, ọ nwere uru dị mkpa maka ịme ngosi Lidar. Na mbụ, otu ụlọ ọrụ Lidar ama ama gwara anyị, na-atụ anya ka anyị mepụta igwefoto igwe ikuku anya, nke ejikọtara na Lidar, maka ịkọwapụta ihe ala na nchịkọta ederede.
4 、 Site D3 ka DG3
R & D nke D3 mere ka anyị ghọta na maka foto oblique, ntinye uche ya enweghị ike ịbụ ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ. Ogologo ya nwere njikọ chiri anya na ogo nke ihe nlereanya ahụ, arụmọrụ nke ịrụ ọrụ, na elu nke ụgbọ elu ahụ. Ya mere na oghere R&D, ajụjụ mbụ a ga-atụle bụ: otu esi esetịpụ anya nke anya m?
Ọ bụ ezie na obere oge dị mkpụmkpụ nwere ezigbo ihe ngosi, mana ogo ụgbọ elu dị ala, ọ dịghị mma maka ụgbọ elu drone. Iji hụ na nchekwa nke drones, a gbadoro anya ogologo oge ka ogologo oge karịa, mana ogologo oge elebara anya ga-emetụta arụmọrụ ọrụ na ụdị ihe nlereanya. Enwere esemokwu dị n'etiti elu ụgbọ elu na ogo 3D. Anyị aghaghị ịchọ nkwekọrịta n'etiti esemokwu ndị a.
Yabụ mgbe D3, dabere na nyocha anyị zuru oke banyere ihe ndị a na-emegiderịta onwe anyị, anyị mepụtara igwefoto DG3 oblique. DG3 na-eburu n'uche ụdị 3D nke ụdị D2 na elu elu nke D3, ma na-agbakwunye usoro ikpo ọkụ na ikpochapu ájá, ka o wee nwee ike iji ya na nku ma ọ bụ VTOL drones. DG3 bụ igwefoto oblique kacha ewu ewu maka Rainpoo, ọ bụkwa igwefoto oblique kachasị ewu ewu na ahịa.
Ibu ibu 650g
Akụkụ 170 * 160 * 80mm
Nha CCD 23.5mm × 15.6mm
Mininum ikpughe oge etiti oge 0.8s
Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo ya dị 28mm / 40mm
ikike nchekwa 320 / 640G
Nbudata data weputara ≥80M / s
5 、 Site DG3 ka DG3Pros
RIY-Pros usoro oblique igwefoto nwere ike nweta mma ịme ngosi uwe àgwà. Yabụ kedu ụdị pụrụ iche Pros nwere na nhazi anya na nhazi ogologo oge? Na nke a, anyị ga-anọgide na-ewebata imewe-mgbagha n'azụ Pros kwa.
6, Oblique oghere n'akuku na ịme ngosi uwe àgwà
Isiokwu gara aga kwuru ụdị echiche a: na mkpumkpu na Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo, na ibu n'akuku nke na-ele, ihe ụlọ facade ozi nwere ike ikpokọta, na mma ịme ngosi uwe àgwà.
Na mgbakwunye na ịtọ ogologo ezi uche, n'ezie, anyị nwekwara ike iji ụzọ ọzọ iji meziwanye mmetụta ịme ngosi uwe: ozugbo dịkwuo n'akuku nke oblique anya m, nke nwekwara ike ịnakọta ọzọ ukwuu facade ọmụma.
Mana n'eziokwu, ọ bụ ezie na ịtọlite ​​nnukwu akụkụ nwere ike melite ogo ịme ngosi uwe, enwere mmetụta abụọ:
1: efficiencyrụ ọrụ nke ọma ga-ebelata. Site na mmụba nke akuku oblique, mmeba nke mpụga nke ụzọ ụgbọ elu ga-abawanye nke ukwuu. Mgbe oblique n'akuku nke karịa 45 Celsius, na ụgbọ elu arụmọrụ ga-ada sharply.
Dịka ọmụmaatụ, igwefoto igwe na-ahụ anya Leica RCD30, ọ bụ akụkụ ọ bụla bụ naanị 30 Celsius, otu n'ime ihe kpatara nka a bụ ime ka arụmọrụ na-arụ ọrụ.
2: Ọ bụrụ na akụkụ oblique buru oke ibu, ìhè anyanwụ ga-adị mfe ịbanye n'ime igwefoto, na-akpata ntigbaa (karịsịa n'ụtụtụ na n'ehihie nke a hazy ụbọchị). Igwefoto oblique nke Rainpoo bụ nke izizi nakweere nhazi ime-ime. Nzube a dị ka ịgbakwunye hood na anya m iji gbochie ya site na ìhè anyanwụ nke oblique.
Karịsịa maka obere drones, n'ozuzu, àgwà ụgbọ elu ha adịghị mma. Mgbe oghere elekere anya na omume nke drone na-ekpuchi, ọkụ na-agba ọsọ nwere ike ịbanye na igwefoto ahụ n'ụzọ dị mfe, na-eme ka nsogbu ahụ dịkwuo elu.
7, Route yitewere na ịme ngosi uwe àgwà
Dabere na ahụmịhe, iji hụ na ụdị ihe nlereanya, maka ihe ọ bụla dị na mbara igwe, ọ kachasị mma ikpuchi ozi ederede nke anya ise nke anya m n'oge ụgbọ elu.
Nke a dị mfe nghọta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ iwu ihe atụ 3D nke ụlọ oge ochie, ụdị ịdị mma nke ụgbọ elu gburugburu ga-adị mma karịa mma ịse naanị foto ole na ole n'akụkụ anọ.
Foto ndị ọzọ ekpuchiri ekpuchi, ozi gbasara ohere na ụdị ederede dị na ya, yana ka mma ịme ihe atụ. Nke a bụ ihe ụzọ ụgbọ elu dị maka ihe osise oblique.
Ogo nke overlap bụ otu ihe dị mkpa na-ekpebi ogo nke ụdị 3D. N'ebe ọhụụ nke foto oblique, ọnụego yikarịrị na-abụkarị 80% na 70% n'akụkụ (data ahụ adịchaghị mkpa).
N'ezie, ọ kachasị mma inwe otu ogo nke overlap maka n'akụkụ, mana oke elu n'akụkụ ga-ebelata arụmọrụ ụgbọ elu (ọkachasị maka drones nku), yabụ dabere na arụmọrụ, izugbe dị n'akụkụ ga-adị ala karịa isi na-ekpuchi.
Ndụmọdụ: Constụle arụmọrụ ọrụ, akara nrịgo anaghị adị elu dị ka o kwere mee. Mgbe ị gafere otu "ọkọlọtọ", imeziwanye akara nrịba ama nwere oke mmetụta na ụdị 3D. Dika nzaghachi nnwale anyị, mgbe ụfọdụ ịbawanye ihe ga-ehichapụ ihe nlereanya ahụ n'ezie. Dịka ọmụmaatụ, maka ọnọdụ ngosi ngosi mkpebi nke 3 ~ 5cm, ogo ịdị mma nke ogo mbadamba dị ala mgbe ụfọdụ dị mma karịa ogo dị elu.
8, Ọdịiche dị na usoro nnabata na nnabata
Tupu ụgbọ elu, anyị debere 80% na 70% n'akụkụ ọ bụla, nke bụ naanị ihe atụ. Na ụgbọ elu ahụ, ikuku ahụ ga-emetụta ụgbọ mmiri ahụ,mgbanwe nke akparamagwa ga - eme ka ihe mebiri emechi gafee obere ihe a na - ekwu.
Na mkpokọta, ma ọ bụ multi-rotor ma ọ bụ ofu-nku drone, ndị dara ogbenye na ụgbọ elu àgwà, na-akawanye njọ nke ụdị 3D. Ebe ọ bụ na obere multi-rotor ma ọ bụ drones na-adịkarị obere ma dị ntakịrị, ha nwere ike ịdaba na nnyonye site na ikuku dị n'èzí. Omume ha anaghị adị mma dị ka nke ọkara / nnukwu multi-rotor ma ọ bụ drones nku, na-eme ka akararịrị akara na mpaghara ụfọdụ ezughị, nke na-emetụta ụdị ịdị mma.
9, isi ike na 3D ịme ngosi uwe nke elu-ịrị elu ụlọ
Dika elu nke ulo ahu na abawanye, ihe isi ike nke ihe nlere nke 3D ga-abawanye. Otu bụ na ụlọ elu dị elu ga-eme ka ohere nke ụgbọ elu nke drone dịkwuo elu, nke abụọ bụ na ka ụlọ ahụ na-abawanye elu, njikọ nke akụkụ ndị dị elu na-adaba nke ọma, na-ebute adịghị mma nke ụdị 3D.
1 Mmetụta nke Overbawanye Njikọ na 3D Dị Nlele nke -lọ Elu Elu
Maka nsogbu dị n'elu, ọtụtụ ndị ahịa nwere ọmarịcha achọtala azịza: mee ka ogo dịkwuo. N'ezie, site na mmụba nke ogo nke overlap, a ga-emeziwanye ihe nlereanya nke ọma. Ihe ndị a bụ nyocha nke nnwale anyị mere:
Site na ntụle ahụ dị n'elu, anyị ga-achọpụta na: mmụba na ogo nke overlap enwechaghị mmetụta na ogo ụdị nke ụlọ dị ala; ma nwere mmetụta dị ukwuu na ụdị ịdị mma nke ụlọ ndị dị elu.
Agbanyeghị, ka ogo nke overlap na-abawanye, ọnụọgụ nke foto ikuku ga-abawanye, oge ịhazi data ga-arịkwa elu.
2 Mmetụta nke Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo ya dị na 3D Dị Nlele nke -lọ Elu Elu
Anyị emeela nkwubi okwu a na ọdịnaya gara aga:N'ihi na facade ụlọ 3D Mpaghara ihe nlere, ogologo oge mgbado anya, ka njọ ịme ngosi uwe ogo. Agbanyeghị, maka ịme ngosipụta 3D nke mpaghara dị elu, a chọrọ ogologo ogologo oge iji hụ na ụdị ịdị mma. Dị ka e gosiri n'okpuru:
N'okpuru ọnọdụ nke otu mkpebi na mbubata ogo, oghere ogologo elekere anya ogologo nwere ike hụ na ezigbo ogo ụlọ na oke ụgbọ elu zuru oke iji nweta ogo ịdị mma nke ụlọ dị elu.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ejiri igwefoto DG4pros oblique mee 3D ịme ngosi uwe nke ụlọ dị elu, ọ bụghị naanị na ọ nwere ike nweta ezigbo ogo ihe atụ, mana izi ezi ka nwere ike iru 1: 500 cadastral nnyocha e mere chọrọ, nke bụ uru nke ogologo Baịbụl hiwere isi n'ebe anya m.
Ileba: Ihe ịga nke ọma nke eserese foto
10, RIY-Pros usoro oblique ese foto
Iji mezuo ezigbo ihe nlere nke oma, n'okpuru nkwenye nke otu mkpebi ahu, odi nkpa iji hu uzo zuru oke na uzo obula. Maka mpaghara ndi nwere nnukwu uzo di elu ma obu ulo di elu, elekere anya nke anya otu ihe dị mkpa nke na-emetụta ụdị ịdị mma. Dabere na ụkpụrụ ndị dị n'elu, usoro igwefoto Rli-Pros nke Rainpoo RIY mere ihe atọ kachasị mma na oghere:
1 Gbanwee nhazi nke len ahụses
Maka usoro ese foto obula, ihe kachasị emetụ n'ahụ bụ na ọdịdị ya na-agbanwe site na gburugburu ruo square. Ihe kachasị kpatara mgbanwe a bụ na nhazi anya m agbanweela.
Uru nke nhazi a bụ na enwere ike ịhazi igwefoto ka ọ pere mpe ma ibu ya nwere ike ịdị obere. Otú ọ dị, nhazi a ga-eme ka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke aka ekpe na aka nri dị ala karịa nke ihu ihu, etiti, na azụ: ya bụ, mpaghara nke onyinyo A dị obere karịa mpaghara nke onyinyo B.
Dịka anyị kwuburu na mbụ, iji meziwanye arụmọrụ ụgbọ elu, akụkụ dị n'akụkụ dịkarịsịrị obere karịa isi okwu, na "nhazi okirikiri" a ga-eme ka mbenata ibelata ibe ya, ọ bụ ya mere ụdị 3D dị n'akụkụ ga-abụ ogbenye karịa isi 3D nlereanya.
Ya mere maka usoro RIY-Pros, Rainpoo gbanwere nhazi anya m: nhazi nhazi. Dị ka e gosiri n'okpuru:
Nhazi a ga-achụrụ akụkụ nke ọdịdị na ibu ahụ, ma uru ọ bụ bụ na ọ nwere ike ijide n'aka na ọ ga-agbadata ma nweta ogo dị mma. N'ime atụmatụ ụgbọ elu n'ezie, RIY-Pros nwere ike belata ụfọdụ n'akụkụ iji melite arụmọrụ ụgbọ elu.
2 Gbanwee nkuku nke oblique lenses
Uru nke "nhazi nke ozo" bu na obughi nani na o doro anya na o zuru ezu, kamakwa o na-eme ka FOV di n'akụkụ ma nwee ike ichikota ihe omuma nke ulo.
Na ntọala a, anyị mekwara ka elekere anya nke anya anya dị n'akụkụ nke mere na ọnụ ala ya dabara na ọnụ ala nke atụmatụ mbụ "gburugburu", na-abawanye ele akụkụ nke akụkụ, dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ na-esonụ:
Uru nke nhazi a bụ na agbanyeghị na agbanwere oghere lens, ọ naghị emetụta etu esi efe efe. Ma mgbe FOV nke lenses n'akụkụ dịwanye mma karị, enwere ike ịnakọta data ozi facade karịa, na ịme ngosi ihe atụ ka mma.
Nyocha dị iche iche na-egosipụtakwa na, ma e jiri ya tụnyere ọdịnala ọdịnala nke anya m, usoro ntanetịime usoro nwere ike imeziwanye ụdị akụkụ nke ụdị 3D.
Aka ekpe bụ usoro 3D emere site na igwefoto nhazi ọdịnala, na aka nri bụ ihe atụ 3D nke igwefoto Pros wuru.
3 Dịkwuo Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo nke oblique anya m
A na-agbanwe lenses kamera RIY-Pros oblique site na ọdịnala "okirikiri nhọrọ ukwuu" ka ọ bụrụ "nhazi nhazi", na nha nke mkpebi dị nso na njedebe nke njedebe nke foto ndị ese foto oblique ga-abawanye.
Iji hụ na ruru adịghị gafere oké egwu uru, Pros oblique lenses Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo na-amụba site 5% ~ 8% karịa tupu.
Aha Riy-DG3 Pros
Ibu ibu 710g
Akụkụ 130 * 142 * 99.5mm
Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo ya dị 28mm / 43mm
ikike nchekwa 640G
Nke gara aga ：Ngosipụta mmekọrịta